कपडा भि’त्रको दृश्य समेत खिच्नसक्ने क्यामरा ! यति पर्छ यसको मूल्य – ( हेर्नुहोस ) – Life Nepali
कपडा भि’त्रको दृश्य समेत खिच्नसक्ने क्यामरा ! यति पर्छ यसको मूल्य – ( हेर्नुहोस )
स्मार्टफोन कम्पनी वन प्लसले हालै आफ्नो फ्लागसिप स्मार्टफोन वनप्लस ८ प्रो लञ्च गर्‍याे । उक्त स्मार्टफोनको एउटा वि’वादित क्यामरा फिचरमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । वन प्लसको क्यामरामा रहेको फोटो क्रोम सेन्सर फिचरमाथि प्र’तिबन्ध लगाइएको हो । उक्त क्यामराले पातलो प्लास्टिक तथा कपडाले छोपिएको चिजको समेत फोटो खिच्न सक्दथ्यो ।
स्मरण रहोस् वनप्लसको पछाडि पट्टिको भागमा ४ वटा मूख्य क्यामराहरु थिए । जसमा एउटा फोटोक्रोम लेन्स थियो । प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो आएसँगै कम्पनीले स्मार्टफोनको उक्त फोटोक्रोम क्यामरा सधैका लागि बन्द गरिदिएको हो । कम्पनीले एक आधिकारिक ब्लग मार्फत् यसको पुष्टि गरेको छ । यसको मुल्य करिब ५० हजार भन्दा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
Previous “श्री’मान टाढा हुदा म’हिलाले यस्तो ह’र्कद” गरिन्, वा’स्तविकता खु’ल्दा प्रहरी नै च’कित”
Next के तपाइँलाई थाह छ ? यी कुराहरु महिला, पुरुषसंग सँधै लु’काउछन !